”Waxaan halkan u imid inaan bog cusub oo taariikheed la qoro AC Milan” – Bonucci oo taageerayaasha kala hadlay Instagram. – Gool FM
”Waxaan halkan u imid inaan bog cusub oo taariikheed la qoro AC Milan” – Bonucci oo taageerayaasha kala hadlay Instagram.
(Guangzhou) 20 Luulyo 2017 – Leonardo Bonucci ayaa sheegay inuu diyaar u yahay “inuu qoro bog cusub oo taariikhda Milan iyo waayihiisa ciyaareed ah” isagoo ka dhawaajiyay in Rossoneri “ay baahi wayn u qabto inay guulaysato”.
Kooxda Milan ayaa maanta ku dhawaaqday inay rasmiyaysay iibka Bonucci, 6 maalmood kaddib markii uu kusoo biiray kooxda Milan oo uu si lama filaan ah uga soo biiray dhanka Juventus isagoo ka hadlay sida uu ula dhacsan yahay halyeeyadii soo maray kooxda Milan gaar ahaan dhanka daafaca, isagoo hoosta ka xarriiqay hamigiisa ah inuu Milan kula soo laabto figta sare ee Yurub.
“Marka aad ka fikirto AC Milan, waxaad si dabiici ah u xusuusanaysaa taariikhda kooxda, horyaalladii soo xirtey funaanadda kooxda,” ayuu ku bilaabay war uu kusoo qoray Instagram.
“Waxaan ka fikirayaa Baresi, Costacurta, Maldini, Nesta, Tassotti. Waan u riyaaqaa wixii ay kubadda iyo naadiganba kusoo biiriyeen. Waa halyeeyo.
“Waxaan maanta u imanayaa inaan Rossoneri iyo waayeheeygaba u qoro bog cusub oo taariikheed.
“Hadda uu hardanku bilaabmayaa, tacabbur cusub oo aan la bilaabayo saaxiibaday kuwaasoo, sida aniga, aad ugu baahan inay guulaystaan.
“Waxaan u mahad celin lahaa kooxda oo idil, maareeyaha guud ee Fassone, maareeyaha isboortiga ee Mirabelli iyo Mr. Montella, oo si xooggan ii taageeray isla markaana dhextaal iiga dhigay mashruucan cusub ee ballaaran.
“Waxay taageerayaashu igu salaameen kalgacayl iyo diirranaan taasina waxay i gelinaysaa inaan aad u dadaalo, inaan la shaqeeyo kooxda inteeda kale, si aannu hubaal uga dhigno inuu xiisuhu sii socdo isla markaana aan bislaanno inta uu fasal-ciyaareedka lagu jiro, jeer aannu ka shaqaynayno sidii aannu u guulaysan lahayn oo aannu AC Milan ugu soo celin lahayn figta sare ee ciyaaraha Talyaaniga iyo Yurub.”
“Hadda ayaannu bilaabaynaa. Wada jirna waannu ku awoodnaa. #HungrierThanEver.”
Goorma ayaa la samaynayaa isku aadka horyaalka Talyaaniga?